Macluumaad muhiim ah oo ku saabsan macdanka ku jiro biyaha aad cabeyso(Somali) | Portland.gov
Baro sida Macdanta u galo biyaha la cabbo, sida aad iskaga tijaabin karto macdanka iyo una yarayn karto soo-gaadhistaada biyaha ku jiro macdanka, iyo waxa Xafiiska Biyaha sameeyo si loo yareeyo macdanka biyaha ki jirto.
Ilaha biyaha laga cabo ee Portland waxay la kulmaan ama ka sarreeyaan dhammaan heerarka gobolka iyo federaalka. Waan nasiib badanahay oo ilaheena biyaha inta badan lagama helo maadada macdanka. ataa ayadoo ay sidaas taha, ayadoo laga fiirinaayo nooca tuubooyinka gurigga kujira, guryaha qaarkood waxay lahaan karaa cadad maadada macdanka ah.
Macluumaad muhiim ah oo ku saabsan macdanka ku jiro biyaha aad cabeyso
Xafiiska Biyaha Portland wuxuu guryaha / dhismooyinka qaarkood ka helay inay sare u kacaan heerarka macdanka ee biyaha la cabbo. Curiyaha macdanka ah waxay sababi kartaa dhibaato, halis ku ah caafimaadka gaar ahaan dadka uurka leh iyo carruurta yaryar Fadlan akhri macluumadkaan si aayar ah saad u aragto waxaad ka sameyn karto si aad u yareyso macdanka ee ku jirto biyaha aad cabeyso.
Waxyeelada caafimaadka ee macdanka
Curiyaha macdanta waxay sababi kartaa dhibaatooyin halis ku ah caafimaadka haddii wax badan kaa galaan jirkaaga biyaha la cabbo ama ilaha kale. Waxay sababi kartaa dhaawac ee maskaxda iyo keliyaha, iyo waxayna fargalin kartaa wax soo saarka unugyada dhiigga cas kaa soo qaadaya curiye hawo ah dhamaan qeybaha jirka. Khatarta ugu weyn ee soo-dhoweynta macdanka waa dhallaanka,carruurta yaryar, iyo dadka uurka leh. Cilmi yaqaannada waxay xariir la leeyihiin saameynta ay macdanka u leedahay maskaxda iyo hoos u dhaca IQ ee carruurta. Dadka waaweyn oo khaba dhibaatooyinka keliyaha iyo dhiig karka waxaa saameyn ku yeelan kara heerarka macdanka oo ka hooseeya in kabadan dadka waaweyn ee caafimaadka qaba. Macdanta waxaa lagu kaydiyaa lafaha, waana la sii dayn karaa nolosha dambe. Xilliga uurka, cunuga wuxuu ka helaa macdanka lafaha qofka uurka leh, taasoo saameyn ku yeelan karta horumarka/koritaanka maskaxda.
Macdanka waxaa sida caadiga ah laga helaa meelo kala duwan ee ku yaala deegaankayna oo dhan. In kasta oo ay dhif tahay in macdanka laga helo isha biyaheenna oo aysan jirin khadadka adeegga macdanta ee nidaamka biyaha, macdanka waxaa laga heli karaa guryaha qaarkood.
Portland,macdanka wuxuu galaa biyaha la cabbo ee daxalka (xirashada) Qalabyada tuubooyinka guryaha ee ay ku jirto macdanka. Qalabkan waxaa ku jiro alxanka macdanta ee loo isticmaalo in lagu daro tuubbo naxaas ah - oo inta badan loo isticmaalo guryaha la dhisay ama la fuulay intii u dhaxeysay 1970 iyo 1985 - iyo walxaha naxaasta ah iyo qasabadaha. Macdanta ee tuubada guryaha waxay ku milmi kartaa biyo la cabbo marka ay biyuhu ku fadhiistaan ​​dhuumahaas dhowr saacadood - sida habeen ama inta dadku ku jiraan shaqada ama iskuulka.
Portland, meelaha ugu badan ilaha ee laga helo macdanka soo-dhoweynta waa rinjiga macdanka ku saleysan, boorka guriga, carrada, iyo qalabka tuubooyinka. Macdanta waxaa sidoo kale laga heli karaa walxaha kale ee guryaha sida waxyaabaha ay caruurtu ku ciyaaraan, waxyaabaha la isku qurxiyo, iyo dheriga.
Tallaabooyin fudud oo lagu yareynayo dabool la"aanta macdanka ee biyaha la cabbo
Biyahaaga raaci si aad macdanta ugu daadiso.. Haddii biyaha aan la isticmaalin dhowr saacadood, socodsii tuubo kasta 30 ilbiriqsi illaa 2 daqiiqo ama ilaa ay ka qabowdo ka hor cabitaanka ama karinta.
U isticmaal biyo qabow, biyo macaan karinta iyo diyaarinta caanaha ilmaha. Macdanka wuxuu si fudud ugu qasmaa biyaha kulul. Ha u isticmaalin biyo tuubada biyaha kulul karinta, cabitaanka, ama sameynta caanaha carruurta.
Ha karkarinin biyaha si aad uga saarto macdanka Karkarinta biyaha ma yareyn doonto macdanka
Tixgeli inaad isticmaasho miiraha. Hubi inay macdanka miirayso, miirayaasha dhan macdanka mareebaane. Si loo ilaaliyo tayada biyaha, loo dayactiro loona bedelo aaladda miiraha iyadoo la raacayo tilmaamaha soo saaraha. Kala xariir NSF International lambarka 800-NSF-8010 si aad u hesho macluumaad ku saabsan miirayaasha biyaha ee la xaqiijiyay.
Ka baar/tijaabi ilmahaaga macdanka. Weydii dhakhtarkaaga ama la xariir LeadLine si aad u ogaato sida ilmahaaga looga baaro macdanka. Tijaabada/baaritaanka heerka macdanta dhiigga ayaa ah habka kaliya ee lagu ogaan karo haddii ilmahaaga uu ku jiro macdanta.
Ka tijaabi/baar biyahaaga macdan. Ka dalbo baaritaanka bilaash ah biyaha macdanta ee LeadLine.
Si joogto ah u nadiifi qalabka hawada ku shaqeeya. Walxaha ay ku jiraan macdanta ee ka timid tuubbada guryaha laga soo gooyo ama guryaha laga soo buuxiyo ayaa ku xayirmi kara mashiinka hawadda ka shaqeeya. Nadiifinta ama badelida joogtada ah dhowrkii biloodba mar ayaa ka saari doontaa walxahaas waxayna yareyn doontaa soo-gaadhistaada macdanta.
Tixgeli inaad iibsato jadwalka macdanta yar. Laga bilaabo 2014, dhammaan tuubooyinka, fiilooyinka, iyo waxyaabaha la isku dhejiyo waxaa looga baahan yahay inay ku jiraan wax ka yar 0.25 boqolkiiba. Markaad iibsaneyso jadwalka cusub, raadi kuwa leh waxyaabaha ugu hooseeya ee maadada macdanta.
Ilaalinta caafimaadka bulshada
Waxay yareysaa sunta macdanta tuubooyinka biyaha ee adoo kordhinaya pH-ka biyaha. Kordhinta maadadaan pH ta ayaa yaraysay macdanka kujira biyaha lacabo wax kabadan kalabar. Si loo sii yareeyo heerarka macdanta ee biyaha tuubada, Portland waxay rakibineysaa daaweyn ka hortagga daxalka oo hagaagsansanadka 2022. Tani hagaajinta daaweynta xakamaynta daxalka waxay kordhin doontaa labadaba pH iyo alkalinity-ka biyaha.
Waxay ka saareysaa nimdaamka ilaha la og yahay ee macdanta. Dhammaan isku xirnaanta adeegga macdanta ee loo yaqaan (pigtails) ayaa laga saaray nidaamka 1998.
Waxay bedeshaa mitirro waaweyn oo leh walxo macdanta ah oo biyo ugu adeega dadka halista ugu jiro. In ka badan toban sano, dhammaan mitirrada beddelka ah waxay ka maran yihiin macdanta
Kheyraadka lagu yareynayo soo-gaadhistaada
IMarka lagasoo tago yaranta sunta macdanka ee kujirta biyaha lacabo, Laanta Biyaha ee Portland, oo kaashanasa LeadLine, waxay taageero ufidinaysaa barnaamijyo lagu yaraynaayo dhamaan ilaha keena in sunta macdanku biyaha gasho:
Tawbaro kahortaga suntan macdanta ah
Barnaamijyada lagu yareynayo halista sunta macdanta ee guryaha u qalma
Baaritaan BILAASH ah heerka dhiigga macdanta ee carruurnimada
Xirmooyinka tijaabada/baaritaanka BILAASHKA ah ee sunta biyaha macdanta ee macaamiisheeda
La xariir LeadLine: 503-988-4000.
Macluumaad dheeraad ah, naga soo waa 503-823-7525. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan yaraynta soo-gaadhista sunta macdanta ee agagaarka gurigaaga / dhismahaaga iyo saamaynta caafimaad ee macdanta, booqo bogga internetka ee EPA’s ama la xariir adeeg bixiyahaaga daryeelka caafimaadka.
Khadadka Tayada Biyaha: 503-823-7525
Adeegga Macaamiisha: 503-823-7770
Adeegga gudbinta: 711
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay: 02/2021